Bumble bee jasper zvichireva - Nyowani yekuvandudza 2021 - Hombe vhidhiyo
Bumblebee jasper kana bumble nyuchi ibwe zvinoreva uye kristal kuporesa zvivakwa zvinobatsira. Bumble nyuchi jaspa ibwe rinowanzo shandiswa muzvishongo semhete, mabheji, mhete, pendende, chishongo, uye zvakare seyakaomarara.
Tenga zvakasikwa bumble bee jasper muchitoro chedu
Izvo seichi chine mavara ane orenji, yero, uye nhema zvinhu zvakaumbwa kubva musanganiswa weIndonesian volcano lava uye sediment. Dombo rine carbonate-rakapfuma rakatanga kuwanikwa pachitsuwa che Java muma1990. Izvo zvinhu zvakapfava, zvine Mohs kuomarara kwe5 kana pazasi. Zviri nyore kutema nekupururudza dombo iri rakaipisisa. Isu tinowanzo zadza mhango neOpticon resin.
Bumble bee jasper (kana Bumblebee) inotova mubatanidzwa wezvinhu zvinoputika, anhydrite, hematite, sarufa, arsenic, nezvimwewo. Pane gakava rakawanda pamusoro pekuti ichokwadi here kuti jasipisi kana agati, sekudanwa kwaitwa nevamwe. Iwo maratidziro akanaka padombo iri anowanzo teedzera iwo mavara anowanikwa pane mabhuru, saka zita. Iko kuchena kweruvara kunokonzerwa nekuvapo kwesarufa, inova chepfu, sekuita arsenic, saka chengetedzo inofanira kutorwa - gara uchigeza maoko mushure mekubata.
bumble bee jasper harisi zvechokwadi dombo rejaspi
Mucheka mutsvuku unobva kune sulfur yakawanda
Kwete jaspi chaiyo
bumblebee jasper ibwe rinoreva uye kristaro kuporesa zvivakwa zvinobatsira
bumble bee jasper crystal inoreva uye kuporesa zvivakwa
Ndeapi machira ekurapa e bumblebee jasper?
Chii chinonzi bumble bee Jasper chakagadzirwa?
Iko bumble bee jasper isingawanzo?
Iyo bumble nyuchi Jasper yakavezwa here?
Bhuruu haisi zvechokwadi dombo rejaspa asi zita rakanamatira nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Iko kuvezwa kweiri dombo reBumblebee kunobva mukubatanidzwa kwemaminerari uye nenyaya yemakomo. Kubatanidza anhydrite, hematite, sarufa, uye arsenic pamwe nezvimwe zvinhu, iyo bumblebee jasper iri ibwe reagate. Iwo mapateni akasarudzika uye anovimbisa kuti hapana mabwe maviri akanyatsofanana, izvo zvinoita kuti bumble nyuchi jasper ibwe rinoyemurika kuve rinosanganisira mune chero chishongo marongero.
Huru dzeyero dzinowanikwa mudombo dzinobva pane yakanyanya sarufa. Zvisinei nokunaka kwedombo iri, zvirinani kugeza maoko ako mushure mekubata dombo iri. Sarufa inogona kuva nenjodzi kuhutano hwako. Zvirinani kunakidzwa nedombo iri kubva kure kana mune rakakosha zvishongo zvinokudzivirira kubva pakuratidzwa.
Kuonekwa kwedombo kunoita kunge jaspi isingagadzirise nyaya yekupa mazita. Iri ibwe rinoshamisa uye zvakare kuwedzera kusinganzwisisike kune chero kuunganidzwa kwezvishongo, kungave mune dombo rakaumbwa kana mukabati. Isu tinoshandisawo dombo iri kushongedza mabhizinesi nemahofisi.
Iro dombo rine simba repasi. Iyo inosunga mukati mayo iyo simba rakasimba regomo rinobva mukati maro.
Iro ibwe risingazivikanwe. Yakaumbwa pakavhurika gomo rakavhurika pasi. Aya mabwe anomutsa ese ari maviri uye anopera solxus chakras.
Iyo solar plexus zvakare iri magetsi chakra, uye nekumutsa iyi nharaunda inogona kugonesa kukura musimba rako rega.
Iyo solar plexus ine zvakare zvine simba kune iyo kuzvitutumadza. Matombo aya anozivikanwa kubatsira nekuwedzera kwekuzvishingisa.
bumblebee jasper zvinoreva inokurudzira zvizere mufaro uye mufaro. Inokurudzira kupemberera kwenguva diki dzehupenyu. Inokurudzira kutendeseka, kunyanya newe, zvinokubatsira kuzadzisa zviroto zvako.
Bumble Bee Jasper, kubva kuIndonesia video
Inokupa simba. Inosimudzira mufaro wakazara uye mufaro. Inokurudzira kupemberera kwenguva diki dzehupenyu. Inokurudzira kutendeseka, kunyanya newe pachako. Inobatsira iwe kuzadzisa zviroto zvako. Mahara akavhara simba kubva mumuviri. Inokurudzira chiitiko chepfungwa. Inoderedza zviratidzo zvekusagadzikana.
Zita rekutengeserana. Zita rekutengeserana remavara ane microus calcite anowanikwa kuGomo rePapandayan, West Java, Indonesia. Izvo zvinhu zvinogadzirwa neiyo yakasarudzika yakakura fibrous calcite ine yakasarudzika yero, orenji, uye dema bhendi.
Bumblebee kristaro yakasarudzika sekristaro ine gypsum, sarufa uye hematite. Izvo zvakaoma uye zvine njodzi kuwana nekuti mugodhi uri mukati megomo rinoputika muIndonesia.
Haina kudhakwa. Iko kuchena kweruvara kunokonzerwa nekuvapo kwesarufa
Natural bumble nyuchi jasper iri kutengeswa mune yedu gem shopu
Isu tinogadzira tsika yakagadzirwa bumble bee jasper jewelry semabatanidzwa maringi, mitsipa, mhete dzemhete, zvishongo, zvishongo… taura nesu for quote.
Bumble nyuchi jasper 17.82 ct
Bumble nyuchi jasper 17.93 ct
Bumble nyuchi jasper 13.25 ct
Bumble nyuchi jasper 15.47 ct
Bumble nyuchi jasper 11.44 ct
Bumble nyuchi jasper 12.89 ct